I-Spundge: Umdibaniso woMxholo woMxholo wamaQela | Martech Zone
I-Spundge: Umdibaniso woMxholo wokuDityaniswa kwamaQela
NgoMgqibelo, Julayi 13, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Ukuchitha yenza kube lula ukulandelela ulwazi olulungileyo, ulwazi lwe-distill, ifom yokunyanzelisa izimvo, kunye nokwenza umxholo onempembelelo. Zombini zinenguqulo yasimahla kunye nohlobo lobuchule beqonga labo. Ukuchitha imali PRO liqonga lomxholo elenza ukuba amaqela kunye nabantu bafumanise, bakhawuleze, benze kwaye basasaze umxholo obandakanyekayo, onempembelelo.
I-Spundge ikuvumela ukuba:
umkhondo -Ugcina umkhondo womxholo obalaseleyo, owenziwe kakuhle kwiiNcwadana zeNqaku ngezihloko, imisitho, abantu okanye naluphi na ulwakhiwo olwanelisa iimfuno zakho. Ulwandiso lwesikhangeli seSpundge luya kuphakamisa ezona ncwadana zibalaseleyo zeereferensi ozifumeneyo kwi-Intanethi.
isihluzo -Yonke imithombo yokuhlangana iyahlangana ngaphakathi kwiincwadana zeSpundge njengomjelo omnye wexesha lokwenyani lomxholo ofanelekileyo. Zama oku kube kanye kwaye uyakuqonda ukuba ligcina ixesha elingakanani.
Bambisana Iincwadana zamanqaku zeSpundge zezentlalo kunye nentsebenziswano, ezikuvumela ukuba ufunde kunye nabaxhasi kunye nemidla ekwabelwana ngayo. Abalandeli kunye nabanikeli bafumana ukwakheka kokufomathiweyo komxholo okhethwe liqela, ukugcina wonke umntu evumelanisile.
Ukuchitha imali PRO
Qaphela izibonelelo zokusebenzisa isisombululo sokugqibela esenziwe ngabenzi, abapapashi kunye nabathengisi engqondweni ngezi zinto zilandelayo kunye nezibonelelo zohlelo lwabo lobuchwephesha:
Ukusebenzisana okwandisiweyo -Abasebenzisi be-Spundge PRO banokusebenza kunye ukuze basebenzisane kwiiNdaba kunye neencwadana. Oku kwenza ukuba urhwebe ngokulula iidrafti, faka iikhomenti kunye nokuhlelwa, jonga uhlaziyo kunye nokulandela umkhondo wenkqubela phambili.
Imithombo yobungcali -Abasebenzisi be-Spundge PRO baxhamla kukhula kwaye ukhethe uluhlu lomxholo we-Firehoses eyakhelwe ngakumbi iingcali. Fumana ifoto elungileyo yamanqaku akho okanye inqaku eligqibeleleyo lokuphinda upapashe, ngonqakrazo nje olumbalwa, kwaye konke kungokuhamba komsebenzi okupheleleyo.
Ukuba bucala Gcina lonke uphando kunye nomxholo kwindawo enye, ekhuselekileyo nefanelekileyo. Iincwadana zakho ze-Spundge ze-Pro kunye namabali angenza ukuba abucala afikeleleke ngokukhuselekileyo kubasebenzis, okanye ngamehlo akho kuphela.
Ukudalwa kokuqukethwe -I-Spundge PRO ikunika umhleli womxholo ekuvumela ukuba urhuqe kwaye ulahle ii-tweets ezigcinwe, imifanekiso, izandi zekliphu, iintetho kunye neevidiyo ngqo ebalini lakho. Inika ukufikelela kwangoko, ngokulula kwikhonkco eligciniweyo kunye nophando kwiiNcwadana zeNcwadi ngelixa ubhala.
Ukunikezelwa kweSmart -I-Spundge ngokuzenzekelayo yongeza uxwebhu xa ukopa kwaye uncamathisela okanye urhuqa kwaye ulahle izinto kwiincwadi zamanqaku. Ikwalayisha kwangaphambili ii-URL xa unxibelelana nomxholo wangaphandle. I-Spundge iyasebenza, inesimilo, kwaye inetiquette inobuhlobo.
Ukudibana koBumbano -Bhala kwiSpundge, shicilela naphina. Amabali abhalwe kwiSpundge angadityaniswa kwangoko ukuze apapashe kwi-CMS enje ngeWordPress, okanye njengencwadi ye-imeyile ngeMeyileChimp. Unokuyila kwaye ucwangcise ii-tweets kunye nohlaziyo lwe-Facebook ngaxeshanye. Bhala kube kanye, emva koko udibanise umxholo apho ufuna ukuya khona.
Ukushumeka kunye nohlalutyo -Ibali leSpundge linokufakwa kuyo nayiphi na iwebhusayithi. Oku kunika enye indlela yokwabelana ngokulula kunye nokupapasha umxholo. Inkxaso eyakhelweyo yeGoogle Analytics ikuvumela ukuba ulandele umxholo wakho.
Cofa Uhlaziyo -Abasebenzisi bePro baxhamla kuhlaziyo olukhawulezileyo kwiincwadana ezinemifanekiso kunye namabali. Utshintsho lutyhalelwa ngexesha lokwenyani naphina apho umxholo wakho ubethelelwe khona.
Imithombo yesiqhelo -Yiba nomxholo wokutya wabucala okanye API Ufuna ukwenza iincwadana? Abasebenzisi be-Spundge PRO banokongeza ngokulula imithombo yolwazi ngokwesiko. Oku kuxhobisa iqela lakho ngendlela efanelekileyo yokuskena iingcingo, jonga oovimba bangaphakathi kunye nokufikelela kulwazi lweefoto. Siza kukunceda ukuba usete ngokukhawuleza.
I-PS: Zithini ii-turtlenecks ezinkulu kwividiyo?
tags: imbekouhlalutyo lomxholoukusebenzisana nomxholoumxholo wekharityhulamulungiso lomxholoukucoca umxholoimithombo yomxholoulungelelwaniso lomxholoukulandelwa komxholohlaziya uhlaziyoukutshizaIsiporho pro
UNGENZI njani ukuPhumela kwi-Influencer, iBlogger, okanye iNtatheli